Tag: naoty marketing automatique | Martech Zone
Tag: naoty marketing automation
Miorina amin'ny mpitarika antsoina hoe Interactive amin'ny marketing automatique
Alarobia 4 Janoary 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Alohan'ny hamakianao an'ity dia hambara feno aho fa naman'i Troy Burk sy Amol Dalvi ary mpiasa vitsivitsy hafa ao amin'ny Right On Interactive (ROI). Ary - reharehanay ny manambara fa hiara-miasa amin'ny Right On Interactive izahay mba hanome lahatsoratra automatique marketing eto amin'ny Martech! Mpiara-miasa izy ireo amin'ny fomba ofisialy hatramin'ny omaly! Tena mahafinaritra ve izany amin'ny andro hanambaranay ny fiaraha-miasa, izany Gleanster, a
Yahoo! Search Marketing… Very ahy ianao!
Talata, Novambra 27, 2007 Talata, Novambra 27, 2007 Douglas Karr
Direct Mail dia mpanelanelana lafo vidy. Satria lafo dia tsy azo tanterahina tampoka. Matetika aho no nilaza tamin'ny mpanjifako fa ny fahafaha misarika ny sain'ny olona amin'ny Direct Mail dia mifandray mivantana amin'ny elanelana misy eo amin'ny boaty mailaka sy ny fitoeram-pako. Ny ampahany amin'ny fampielezana mailaka mivantana izay zava-dehibe kokoa noho ny kendrena ary ilay sombin-javatra dia ny fahaizana manatanteraka amin'ny fampielezan-kevitra. Androany, nahazo famoronana kanto aho